Ny Tanànan’i Mariupol, Tsipika Menan’i Okraina Tsy Azo Ihoarana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Septambra 2016 6:14 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Ελληνικά, Deutsch, Español, عربي, English
Nampiasaina hiarovana an'i Mariupol ny tongotrefatra, ampiasaina mahazatra hanaovana andry famatoran-tsambo, ary hita manodidina ny tanàna voaravaka marika Okraniana. Mariupol, Okraina, 4 Jolay 2016. Sary: Ivan Sigal
20 kilaometatra miala ny vava ady manasaraka ireo separatista tohanan'ny Rosiana sy ny miaramila Okraniana no misy ny tanàna Okraniana Mariupol. Tanàna milamina izy saingy maheno akaiky ny ady. Nihamafy ny ady teo amin'ireo separatista sy ny tafika Okrainiana tao anatin'izay volana vitsy lasa izay, ka afaka mandre tifitra tafondro sy balafomanga ny mponin'i Marioupol rehefa mitsoka ny rivotra avy any atsinanana; avy any amin'ny sisintanin'i Chirokinie sy Novotroïtskie.
Nametraka an'i Marioupol ho tsipika mena tsy azo ihoarana ny Okrainiana: tanàna seranan-tsambo ahitana foto-drafitrasam-pitaterana fototra, fidirana ao amin'ny ranomasina Azov, sy orinasa fandrendreham-by goavana anankiroa, ary koa indostria matanjaka hafa izany. Tanàna tian'ny Rosiana alaina ihany koa izany hananganana tetezantany mankany Krimea, izay hiaro bebe kokoa ny fahaveloman'ny tetipanorona hitakian-dry zareo ny zaratany.
Sarintanin'i Mariupol, Okraina 4 Jolay 2016. Sary: Ivan Sigal
Nijanona tao Marioupol nandritra ny herinandro aho, mandehandeha eny an-tanàna, maka sary ary manadihady ny fihetsiky ny olona manoloana ny ady, ny toe-javatra iainan'izy ireo manokana sy ny fahatakaran'izy ireo ny natioran'ny fandrahonana. Te hijery aho raha afaka manazava sy mamaritra ny teritery ara-toetsaina sy ny fisalasalana ateraky ny fanakaikezan'ny vava ady aho, ary hijery koa ny mety ahitana imaso ireo teritery ireo eny amin'ny endritany (tontolo manodidina).
Ity no ady mampiharihary manokana ny fifanandrinam-baovao sy ny herisetra ara-batana, ary mampanjavozavo ny fahavitrihan'ny fampielezam-baovao diso sy ny propagandy, mitsipaka ny tsy isalasalana ny hanaovana herisetra, ary mitady izay hampifanaritaka na ireo vondron-kery mifanandrina na ireo vahoaka kinendry. Ity ady tsy mahazatra ity no vavolombelon'ny diam-porofo avy amin'ny loharanom-baovao an-tserasera, sy izay mety ho fanodikodinan-tsaina atao amin'izany porofo izany. Ity no ady izay singa ara-tetikady mazava ny fisaritahana, fa tsy fiantraikany fotsiny. Ny lahatenin'ny zavon'ady, amin'ny teny hafa, dia nokendrena hanome rariny ny adim-baovao. Amin'izay fomba izay fotsiny, dia mametraka tontolo izay tratran'ny fihaikana koa na dia ny fitsipika sy ny lalànan'ny ady iraisampirenena aza amin'ny fanazavana ny “ady hybrida” endrika vaovaon'ny ady—na dia tsy vaovao aza izany—.
Talohan'ny ady, nanohana betsaka ny kolontsaina sy ny teny Rosiana ny mponin'i Marioupol, ary nandray anjara fohy tamin'ny hetsika separatista tamin'ny 2014 sy 2015. Ity faritra ao Okraina ity dia nanohana betsaka an'i Viktor Yanoukovytch tamin'ny fifidianana, ary nandray anjara tamin'ny ezaka hijanonana eo amin'ny fahefana ny polisy ao an-toerana. Mandritra izany, sarotra afenina ny voka-dratsin'ny ady sy ny politika teo amin'ny fiainan'ny mponina. Mety manintona ny maha ao anatin'i Rosia, saingy tsy manintona kosa ny fidirana ho anisan'ny karazam-pirenena (ahilikiliky ny hafa).
Famelaram-piafenana manamorona ny morotsiraky ny tanànan'i Mariupol, izay manafina ny lavaka mamandrika fiara mifono vy sy ny faritra fanaovana fanarazantena ho an'ny miaramila sy ny tafi-piarovana sivily Okrainiana. Mariupol, Okraina, 4 Jolay 2016. Sary: Ivan Sigal
Fahaosana, fiafinafenana ary fisalasalana no vokatr'izany. Marobe ankehitriny ireo mponina miaiky ny loza amin'ny fiarahana amin'ny hetsika separatista, ny ady ary ny fitokana-monina aterak'izany avy eo. Ny tafika Okraniana, miaraka amin'ny milisy no mifehy ny tanàna sy ny seranam-piaraminidina, ary nohamafisin'ny miaramila ny manda. Mbola manana miaramila matanjaka indrindra ny Rosiana, saingy tsy misy ny antoka fa mahazo ny fanohanan'ny vahoaka izy ireo, na fandresena mora foana manoloana ny tafika Okraniana izay nanam-potoana nianarana niady.
Filazana fifampizaran-toerana ao anaty fiara raha handeha ho any Krimea mameno ny tabilao fametahana filazana ao an-toerana. Mariupol, Okraina, 4 Jolay 2016. Saripika: Ivan Sigal
Tony i Mariupol; mangina ny arabeny. Mety ho ara-panoharana ny ilazana hoe mitazona ny fisefosefony tony ny tanàna. Vao haingana anefa i Moskoa no lazaina fa nampitombo ny hatetehan'ny famindrana fitaovam-piadiana mankany amin'ireo toerana separatista ary efa nilaza fa efa maty fahavelony ny fampitsaharan'ady. Izany hetsika izany dia miteraka rivotry ny goragora ara-maoraly izay mety hamelona indray ny fifanandrinana.
Ary na nanapa-kevitra ny hanani-bohitra i Rosia na tsia, dia nananganana sehatra ara-paikady ny lahatenin'i Kremlin. Amin'io efitra fanaovana sarinady io, dia azo heverina ara-petrakevitra ho manomana na hanamarina fananiham-bohitra mihitsy aza, na mety mba hahazoana vahana fotsiny rehefa tonga eo an-databatra fifanarahana, rehefa ho avy ny fotoana hiresahan'ireo mpitondra firenena fandriampahalemana. Amin'izany fihetsika izany i Moskoa dia mitsapa indray ny fahatezàn'ny fanambarany ny tenany ho manana hery ao amin'ny faritra ao Okraina.
Fiatoan'ny Bus ao amin'ny Lalambe Lunina. Mariupol, Okraina, 4 Jolay 2016. Saripika: Ivan Sigal
Efa misy voatran’ ity lahatsoratra ity ihany koa nivoaka taloha tao amin'ny ivansigal.net [en].